November 2020 – Page3– မြန်မာသတင်းစုံ
Posted on November 19, 2020 Author admin	Comments Off on တစ်ကိုယ်ရေအသာဖြေ
Posted on November 15, 2020 Author admin	Comments Off on ဂွင်ဖန်သောမမ ………… ရှယ်နိပ် ဖတ်ရူ့ပါရှင့်
မီးဖိုချောင်ထဲကချစ်ဇာတ်လမ်း ===================================== #အော်စာအုပ် #အောစာပေ #အပြာစာအုပ် #သိုင်းကျမ်း #ဖူးစာအုပ် #မြန်မာအောစာ တစ်နေ့မှာတော့ ကျမရေမချိုးခင်ထမိန်ရင်လျားနဲ့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေတုန်းဗြုန်းဆိုကံချားတစ်ယောက် ရုတ်တရက်ရောက်လာပါတယ်.. ကျမနည်းနည်းလန့်သွားတယ် အိမ်မှာဘယ်သူမှမရှိကြပေမဲ့အိမ်ထဲမှာတစ်ယောက်ယောက်တွေ့သွားလို့မဖြစ်ဘူး. .ဟဲ့..နင်ဘာလာလုပ်တာလဲ..ကံချားကဘာမှပြန်မဖြေဘဲ..ကျမကိုဖက်လိုက်ပြီးရင်လျားထားတဲ့ထမိန်ကိုဖြေလိုက်ပြီးကျမနို့နှစ်လုံးကိုသူ့လက်ဝါးကြီးနဲ့ဆုပ်နယ်လိုက်ပါတယ်..အိုး..ဘယ်လိုလုပ်တာလဲ.မီးဖိုခန်းထဲမကောင်းဘူး..တစ်ယောက်ယောက်ဝင်လာရင်ခက်လိမ့်မယ်..ကျမဘယ်လိုပြောလဲမရပါဘူး ကံချားရဲ့ပူနွေးတဲ့လက်ဖဝါးနဲ့ကျမရဲ့နို့သီးနှစ်လုံးကိုပွတ်သပ်နယ်ဖတ်နေတာကြောင့် ကျမဟာရှိန်းကနဲဖိန်းကနဲ ဖြစ်လာပြီးကာမစိတ်တွေဝုန်းဆိုထလာပါပြီ သူဟာထမိန်ကိုခါးအထိလျှောချလိုက်ပြီးကျမနို့သီးခေါင်းတွေကိုစုတ်လိုက်ပါတယ်. .အား..ကျမရင်တွေဖိုလာပါတော့တယ်. .သူဟာကျမနို့သီးကိုစုတ်လိုက်သူ့လျှာကြမ်းကြီးနဲ့ လျှက်ပေးလိုက်လုပ်နေတာကြောင့်ကျမလဲသူ့ခေါင်းကိုဖက်ထားပြီးနို့နှစ်လုံးကိုကော့ပေးလိုက်မိပါတယ် အို..ကံချားနင်ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲအဟင့်.ဟင့်..ငါမနေနိုင်တော့ဘူးနော်.ဟင်းဟင်း အဟင့် . အား. ကောင်းလိုက်တာစိတ်တွေထလာပြီကွာ. အိုး.. နို့သီးခေါင်းကိုစုတ်ပေးတာအရမ်းကောင်းတယ် အား..အိုး. .သူဟာလက်တစ်ဖက်နဲ့နို့ကိုကိုင်ဆုပ်ထားရင်းနောက်တစ်ဖက်က ကျမစောက်ဖုတ်ကိုနှိက်လိုက်ပါတယ်… ကျမထမိန်ကကွင်းလုံးကျွတ်သွားပြီးကျမဟာကိုယ်တုံးလုံးပကတိဖြစ်သွားပါတော့တယ် သူဟာကျမရဲ့သန်စွမ်းမဲနက်တဲ့စောက်မွှေးတွေကိုလက်ချောင်းတွေနဲ့ကစားရင်းက စောက်ပတ်နှတ်ခမ်းကြားထဲကိုလက်ချောင်းတွေနဲ့ထိုးဆွနေပါတော့တယ်..စောက်ရည်တွေဟာဝေါကနဲထွက်လာပြီးကျမစောက်ပတ်တစ်ခုလုံးရွဲနစ်လာပါတော့တယ်ရှင် ကံချား…တံခါးပိတ်ခဲ့ရဲ့လား…စေ့ရုံဘဲစေ့ခဲ့တာ..အဲ..နင်ကတော့လေ. သွားသေချာပိတ်ပြီးကန့်လန့်ချထား.ကျမပြောလိုက်တော့ကံချားလဲ.တံခါးကိုကန်လန့်ထိုးပြီးပြန်လာခဲ့ပါတယ် ကျမဟာထမိန်ကိုကွင်းလုံးချွတ်ချလိုက်ပြီး..ကိုယ်တုံးလုံးအတိုင်းကံချားဆီကိုလျှောက်သွားလိုက်ပြီး…သူ့လီးကိုပုဆိုးပေါ်ကစမ်းကိုင်လိုက်ပါတယ်…အိုး..လီးကြီးကတုတ်ခဲနေတာဘဲ.ကြိုက်လိုက်တာ…ကျမဟာသူ့ပုဆိုးကိုချွတ်ချလိုက်ပါတော့တယ်…အိုး…သူ့လီးကြီးကစင်းပြီးတွဲလောင်းကျနေပါတယ်..ဒစ်ကလန်ထွက်နေတာကြောင့် လီးထိပ်ကြီးကဖေါင်းကားနေတာကအသဲယားစရာကြီး…ကျမဟာသူ့လီးကိုတပ်မက်စွာကိုင်ဆုပ်လိုက်ပြီး…ဖြည်းဖြည်းချင်းဂွင်းတိုက်ပေးနေပါတော့တယ်….အိုး..လီးကြီးကကိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာ..ပူနွေးပြီးမာတာတာဖြစ်နေသေးတယ်..ကျမလဲလီးကိုညှစ်ပေးလိုက်လီးထိပ်နဲ့အ ရင်းကိုထိအောင်၈ွင်းတိုက်ပေးနေတော့သူ့လီးကြီးကမာတောင်လာပါတော့တယ်…ဟော..နင့်လီးကြီး..တောင်နေပြီ…စုတ်ချင်လာပြီ..နင့်လီးကိုပေးစုတ်နော်..ကျမဘယ်လိုမှမအောင့်နိုင်တော့တာနဲ့သူ့ရှေ့မှာငုတ်တုတ်ထိုင်လိုက်ပြီး ကံချားရဲ့လီးကိုပါးစပ်ထဲထိုးထည့်လိုက်ပြီးလီးစုတ်နေမိပါတော့တယ်…ကျမဟာလီးစုတ်တဲ့နေရာမှာတော့အရမ်းကျွမ်းကျင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်….ရှင်တို့ရောတစ်ချီလောက်အစုတ်ခံကြည့်ချင်လား…ကျမလျှာမှာကအက်ကွဲကြောင်းတွေပါတော့ ကျမရဲ့လျှာနဲ့လီးထိပ်ကိုရစ်ဆွဲလိုက်ရင်ဘယ်သူမှမခံနိုင်ဘူး…ကျမဟာသူ့လီးတုတ်တုတ်ကြီးကိုငုံလိုက်စုတ်လိုက်ဒစ်ကိုလျှာနဲ့ယက်ပေးလိုက်လုပ်ရင်းလက်ကလဲဂွင်းတိုက်ပေးနေပါတယ်..သူကလဲကောင်းလွန်းလို့တစ်အားအားနဲ့အော်ညည်းနေရင်းလီးကိုကျမပါးစပ်ထဲထိုးထည့်လိုက်ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်နဲ့ပါးစပ်ကိုလိုးပေးနေပါတယ်..လီးတစ်ချောင်းလုံးကိုစိတ်ရှိသလိုစုတ်လိုက်ငုံလိုက်ဒစ်ကြီးကိုလျှာနဲ့ယက်လိုက်လုပ်ပေးနေရတာလဲအရသာတစ်ခုပါဘဲရှင်..ကျမဟာရှေ့ဖက်ကလီးစုတ်ရတာအားမရဖြစ်လာပြီး..မတ်တပ်ရပ်လိုက်ပြီးဘေးတိုက်သူ့ပေါင်ကိုခွလိုက်ပြီးသူ့လီးကိုအပေါ်စီးကစုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်..အဲဒါမှသူ့ရဲ့လီးဒစ်ကြီးရဲ့အပေါ်ပိုင်းကိုထိထိမိမိလျှာနဲ့ယက်ကစားနိုင်မှာမဟုတ်ပါလား…ခုမှဘဲသူ့လီးကိုငုံလိုက်တဲ့အခါမှာကျမလျှာကွဲကြီးနဲ့ ဒစ်ကြီးကိုပယ်ပယ်နယ်နယ်ကြီးယက်ပေးလို့ရတော့တယ်…လီးကိုငုံရင်းဒစ်ကိုလျှာနဲ့ဖိကပ်ထားပြီးပါးစပ်ထဲစုတ်ထားရင်းအရင်းကိုမိအောင်စုတ်လိုက်ထိပ်ကိုရောက်အောင်ဆွဲပြီးစုတ်လိုက်လုပ်ပေးနေတော့ ကံချားတစ်ယောက်စိတ်တွေအရမ်းထလာပြီးကျမစောက်ပတ်ထဲကိုလက်နဲ့ထိုးထည့်နေပါတော့တယ်..ကျမလဲသူ့လက်ဝင်သာအောင်ပေါင်ကိုကားပြီးစောက်ပတ်နှတ်ခမ်းသားကိုဖြဲပေးလိုက်ပါတယ်.ကံချားဟာကျမစောက်ပတ်ကြီးကိုလက်နှစ်ချောင်းပူးပြီးထိုးနေပါတယ်..ကောင်းလိုက်တာ..စောက်ခေါင်းထဲကိုလက်နှစ်ချောင်းနဲ့ကလီနေတော့ကျမလဲဘယ်နေနိုင်တော့မှာလဲ…ဒါနဲ့ကျမလဲ.ကံချား..ငါမနေနိုင်တော့ဘူး..အလိုးခံချင်တယ်..လိုးပေး..ငါ့စောက်ပတ်ကိုအရင်မှုတ်ပြီးလိုးပေးတော့..နင့်လီးကြီးနဲ့ငါ့စောက်ပတ်ကိုလိုးပေးတော့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်..ကံချားဟာကျမကိုမတ်တတ်ရပ်ခိုင်းလိုက်ပြီးခြေထောက်တစ်ချောင်းကိုခုံပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ပြီးကျမပေါင်ကြားထဲထိုင်ချလိုက်ပြီးခေါင်းကိုမော့ပြီးကျမစောက်ပတ်ကိုလက်နဲ့ဖြဲလိုက်ပြီးစောက်ခေါင်းအဝကနေစောက်စိရှည်ရှည်တုတ်တုတ်ကြီးအထိသူ့လျှာကြီးနဲ့သိမ်းယက်ပါတော့တယ်..အား..အမလေး..ကောင်းလှချည်လားကံချားရဲ့ယက်ပေး..စောက်စိကိုယက်ပေးစမ်း..အေး.ဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်..အဲဒီအတိုင်းယက်ပေး. .အား..အ.မ လေး..ကောင်းလိုက်တာပါလား…စုတ် ..စုတ်ပေးအုံး….ငါံ့စောက်စိကိုစုတ်ပေးစမ်း..အား..သေပါပြီ..အမေရဲ့..ကောင်းလိုက်တာပါလား…စုတ်ပေးစောက်စိကို…ကံချားဟာကျမခိုင်းတဲ့အတိုင်းစောက်စိကြီးကိုတစ်ပြွတ်ပြွတ်မြည်အောင်စုတ်နေပါတယ်..ကျမလဲသူ့ခေါင်းကိုဆွဲပြီးသူ့နှတ်ခမ်းသားနဲ့လျှာကိုစောက်ပတ်နဲ့အစုန်အဆန်ဖိပြီးပွတ်တိုက်နေလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့နှာခေါင်းချွန်ချွန်ကြီးကိုစောက်ခေါင်းထဲထိုးထည့်ပြီးဘယ်ညာဝိုင်းပစ်လိုက်တယ်..ပြီးတော့သူ့မျက်နှာအနှံ့စောက်ပတ်နဲ့ပွတ်ပစ်လိုက်တယ်…အဟင်း..ဟင်..အိုး..အား..ကောင်းလိုက်တာ …ခံချင်လာပြီ..မရတော့ဘူး…အား …ခံချင်တယ်..အလိုးခံချင်တယ်..လိုး..လိုး.ပေးပါတော့..ဟယ်..ငါမနေနိုင်တော့ဘူ..ကျမဟာသူ့ကိုအတင်းလိုးခိုင်းနေမိပါတယ် …ကျမစောက်ရည်တွေဒလဟောထွက်လာပြီးသူ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးစောက်ရည်တွေပေကျံနေပြီ… ကျမသူ့ကိုဆွဲထလိုက်ပြီး..မတ်တပ်ရပ်လျှက်ပဲ သူရဲ့လီးရှည်ရှည်တုတ်တုတ်ကြီးကိုလက်နဲ့ဆွဲလိုက်ပြီး စောက်ပတ်ကြားထဲထိုးထည့်ပေးလိုက်ပြီး.. “လိုး..လိုးတော့.” ကံချားဟာကျမလိုးခိုင်းတဲ့အတိုင်းဖင်ကိုကော့ပြီးလိုးထည့်လိုက်ပါတယ်.ဒါပေမဲ့သူ့လီးဟာကျမစောက်ခေါင်းထဲမဝင်ဘဲချော်ထွက်သွားပါတယ်..အိုး…ကျမဟာဖင်ဝကိုလီးနဲ့ထိုးမိသွားတာကြောင့်လန့်ပြီးအော်လိုက်မိပါတယ်…“နင့်လီးကလည်းရှည်လိုက်တာ..ရှေ့ကလိုးတာနောက်ကဖင်ဝကိုတောင်ထိုးမိနေပြီဖင်ခံချင်စိတ်တောင်ဖြစ်လာပြီ..”..ကျမဟာသူ့လီးကိုလက်နဲ့သေချာကိုင်ပြီးစောက်ခေါင်းဝမှာတေ့ထားလိုက်ပြီးကိုယ်နဲ့အသာဖိပြီးစောက်ဖုတ်ထဲထိုးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်.မာတောင်ပြီးအကြောတွေအပြိုင်းအရိုင်းထနေတဲ့.သူ့လီးကြီးဟာကြွက်သားအတွန့်အတက်တွေနဲ့ဇောင်းထနေတဲ့ကျမစောက်ခေါင်းထဲကိုဒစ်မြုပ်ရုံမကသုံးပုံတစ်ပုံလောက်ဝင်သွားပါတယ်… […]
Posted on November 14, 2020 Author admin	Comments Off on အပျိကြီးပေါက်စ ………… ရှယ်နိပ် ဖတ်ရူ့ပေးပါရှင့်
ကိုဗဈနဲ့ပတျသကျပွီး ရေးမယျလို့ လုပျနတောတော့ ကွာပါပွီ။ သို့သျော မနကေ့ အားလုံးခဈြကွတဲ့ အောငျလအနျဆနျးရှုံးသှားတော့ စိတျမကောငျးတာနဲ့ ဖွဈအောငျရေးမှပါဆိုပွီး စိတျကဖွဈလာလို့ ပို့ဈတငျလိုကျပါတယျ။ တကယျဆို အောငျလဟာ ကိုဗဈဖွဈထားတာ သိပျမကွာသေးပါဘူး သူ့ရဲ့စိတျကမာလို့သာ အထဲက သူ့ရဲ့ နှလုံးအဆုတျ ဦးနှောကျက နဂိုအနအေထား ပုံမှနျအဆငျ့ထိ ရှိခငျြမှရှိပါအုံးမယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျပိုငျးကပဲ အသကျ ၃၃ နှဈအရှယျ ယူကရိနျးက ကာယဗလလကေ့ငျြ့သငျကွားပေးသူ ကိုဗဈကွောငျ့ သဆေုံးရတယျဆိုတဲ့အကွောငျး စိတျမကောငျးစှာနဲ့ သတငျးတငျဘူးပါတယျ။ ဒါနဲ့ပတျသကျပွီး WHO က ညှနျကွားရေးမှူး Dr. Tedros မနကေ့ ပွောတဲ့အကွောငျးအရာမှာလဲ ကိုဗဈကူးစကျခံရသူတှနေဲ့ပတျသကျလို့ ပွောထားပါတယျ သူ့ပို့ဈမှာ လူနာတှကေ သူတို့ရဲ့လကျရှိခံစားနရေတဲ့အခွအေနနေဲ့ပတျသကျပွီး ပွောပွကွတာမှာလဲ ဘယျလိုခံစားနရေတယျဆိုတာ ပွောထားတာ စိတျမကောငျးစရာဖွဈတဲ့ အကွောငျးပါပါတယျ။ အကဉျြးခြုပျတငျပွရလြှငျ လကျရှိအခြိနျမှာ […]
(၂၁)ကြိမ်မြောက် သိန်းတစ်သောင်းကံထူးရှင် ========================== ပခုက္ကူ ခိုင်ရွှေဝါထီဆိုင် ပိုင်ရှင် ဦးဇော်နိုင်မှ ရောင်းမကုန်သည့် ထီလက်ကျန်မှ သိန်းတစ်သောင်းဆုကြီး ဆွတ်ခူး Myat Thu
(၂၁) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ သိန်းထီပေါက်စဉ် ၁.၁၁.၂၀၂၀ သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ဌ ၁၁၁၉၃၇ သိန်းတစ်သောင်း ယ ၅၃၉၃၅၄ သိန်းငါးထောင် ဝ ၃၇၅၆၀၁ ကဂ ၉၀၄၉၇၀ သိန်း၂၀၀၀ဆု ဓ ၆၇၄၆၈၉ ဂ ၃၉၃၂၀၃ အ ၁၀၁၄၃၆ သိန်း ၁၀၀၀ ဆု အ ၁၃၀၈၂၁ ကခ ၅၂၂၁၅၂ ဒ ၇၁၅၀၆၆ သ ၇၅၈၅၂၂ Credit – POWER ထီဆိုင်ကြီး ပြင်ဦးလွင်
Posted on November 1, 2020 Author admin	Comments Off on (၂၁) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ သိန်းထီပေါက်စဉ်